Shiinaha Warshadaha Gelatin ee warshadda koollada iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Emulsification iyo awooda ka joojinta gelatin
Warshadaha Gelatin waxay leedahay awood xoog leh oo ay ku dheehdo kuna dhiirrigeliso kala firdhinta iyo ka joojinta wejiyada kala duwan, taas oo sidoo kale loo fahmi karo inay tahay awood difaac ah oo loo yaqaan 'colloid'.
Awoodda xabagta ee gelatin
Gelatin-ka warshaduhu wuxuu leeyahay xoog dhejis adag, wuxuuna ilaalin karaa sharafta sheyga, taas oo laxiriira biyo-is-weydaarsiga gelatin.
Isticmaalka gelatin warshadeed
1. Marka hore mugga isla biyo ama waxyar ka badan (guud ahaan xabagta iyo saamiga biyaha ee 1 illaa 1.2-3.0, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo biyo diirran) si aad ugu qoyso xabagta dhowr saacadood ama wax la mid ah, ka dhig xabagta xabagta jilicsan , ka dibna la kululeeyo ilaa 75 digrii, ka dhig dareeraha xabagta la isticmaali karo.
2. Saamiga xabagta iyo biyaha waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo isku-darka loo baahan yahay. Biyo badan, nafis yar, iyo biyo yar, nafwaayay sare. Marka la kululeeyo gelatin, heerkulku waa inuusan aad u sarreyn, maxaa yeelay heerkulka ka sarreeya 100 darajo ayaa hoos u dhigi doona nafaqada sababo la xiriira hoos u dhaca ku yimaadda kulka, iyo gelatinku wuu sii gaboobayaa wuuna sii xumaanayaa.
3. Waxaa jira precipitates raad ee isticmaalka xabagta, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in ay isku daraan biyo marka aad isticmaalayso si ay ula qabsadaan ku nafwaayay iyo isbeddello. Kuleylka qubayska waa in loo isticmaalaa in lagu kululeeyo xabagta. Gabi ahaanba lama ogola in si toos ah loogu kululeeyo xabagta weelka.
4. Gelatin waa in lagu hayaa xaalad heer kul ah ka hor inta aan la adeegsan. Sidaa darteed, marka biyaha loo baahdo in la isticmaalo, heerkulka biyaha iyo kolloidku waa inay asal ahaan isku mid ahaadaan, oo biyo qabow laguma darin. Markaad isticmaaleyso gelatin, xawaaraha waa inuu ahaadaa mid deg deg ah oo isku mid ah. Isku hagaaji qadarka biyaha iyo gelatin si aad uhesho nafwaayaha aad rabto.
Hore: Xaashida 'Gelat Transparency High' ee Macmacaanka
Xiga: Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay Xabagta Jelly